Manuka Honey ဆိုတာဘာလဲ? - OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Nov 14, 2018 Last updated Nov 14, 2018
-Manuka Honey ဆိုတာ ၁၉ ရာစုလောက်ကနေစပြီး ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ သဘာဝအိမ်တွင်းဆေးဝါးအဖြစ် ခေတ်စားလာတဲ့ ပျားရည်တစ်မျိုးပေါ့။ Manuka ဆိုတာ နယူးဇီလန် နိုင်ငံမှာ သဘာဝအလျောက် အလေ့ကျပေါက်တဲ့ ချုံပင် အပုလေးတစ်မျိုးပါ။ ဒီ Manuka ပင်ရဲ့ပန်းတစ်မျိုးကိုပဲ စားသုံးတဲ့ ပျားလေးတွေဆီကရတဲ့ ပျားရည်ကို Manuka honey လို့ခေါ်တာပါ။ နယူးဇီလန် Manuka ပင်လေးတွေကို အစွဲပြု ပြီးတော့ပေါ့။
ရိုးရိုးပျားရည်နဲ့ Manuka ပျားရည် ဘာတွေကွာခြားလဲ?
– ရိုးရိုးပျားရည်က ပန်းမျိုးစုံ အပင်မျိုးစုံကို မှီဝဲထားတဲ့ပျားလေးတွေဆီကမှ အဆင့်ဆင့် ပြန်သန့်စင်ပြီးထုတ်ယူထားတာပါ။ Manuka ပျားရည်ကတော့ Manuka ပန်းတစ်မျိုးထဲကိုသာ မှီဝဲထားတဲ့ ဥရောပပျားလေးတွေဆီက ထုတ်ယူထားတဲ့အတွက် ပြန်သန့်စင်ဖို့ မလိုတော့အောင် သန့်ရှင်းပါတယ်။
အရောင်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ပုံမှန်ပျားရည်က ရွှေညိုရောင်တစ်ပြေးထဲ ကြည်ကြည်လေးရှိပြီး နည်းနည်းကျဲပါတယ်။ Manuka ပျားရည်ကတော့ ပုံမှန်ထက် ပိုပျစ်တယ် ပိုနောက်တယ် အရောင်နည်းနည်း ပိုရင့်ပါတယ်။
ပျားရည်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သုတ်သင်နိုင်တဲ့ Hydrogen peroxide နဲ့ Methylglyoxal (MGO) လို့ခေါ်တဲ့ ပဋိဇီဝဓာတ်သတ္တိတွေပါပါတယ်။ ပုံမှန်ပျားရည်တွေမှာ MGO က ပမာဏအနည်းငယ်သာပါပြီးတော့ Manuka honey မှာတော့ ပမာဏ အလွန်များပြားစွာ ပါရှိနေပါတယ်။ ပိုထူးခြားတာက MGO မဖြစ်ခင် အဆင့်ဖြစ်တဲ့ compound တစ်ခု ( precursor of MGO) Dihydroxyacetone ကလဲ Manuka ပန်းရဲ့ ဝတ်ဆံထဲမှာ အမြောက်အများပါဝင်နေတာပါပဲ။ ဒါက Manuka ပျားရည်ကို သာမန်ပျားရည်တွေနဲ့ ကွာခြားသွားစေတဲ့ အဓိကအချက်ပါပဲ။ နောက်ထပ်ကွာခြားစေတဲ့ အချက်တွေကတော့ Manuka ပျားရည်ဟာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ နောက်ဓာတ်တိုးဆန်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိတွေ (Antioxidant property) နဲ့ အရွယ်တင်နုပျိုစေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ (Anti aging property) တွေက သာမန်ပျားရည်ထက် ၄ ဆ ပိုမိုပါဝင်နေတာပါပဲ။
အသန့်စင်ဆုံး အကောင်းဆုံး Manuka ပျားရည်ကို ဘယ်မှာရှာဖွေကြမလဲ?
Manuka ပျားရည်ဟာ ခုခေတ်မှာ ကျန်းမာရေးအရရော အလှပရေးရာအရပါ အမျိုးမျိုး အသုံးဝင်နေတော့ ထုတ်လုပ်သူတွေကလဲ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူလို့ ရနေပါပြီ။ အဲတော့ အကောင်းဆုံး Manuka ပျားရည်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲပေါ့။ Manuka ပျားရည်ရဲ့ အရေအသွေးကို တိုင်းတာဖို့ အားလုံးက Unique Manuka Factor Rating (UMF) ဆိုပြီး အတိုင်းတာတစ်ခု သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီကိန်းဂဏန်းအတိုင်းတာက ပျားရည်ထဲမှာ MGO & Dihydroxyacetone ဘယ်လောက် Level ပါလဲဆိုတာကို ညွှန်းပါတယ်။ UMF rating မြင့်လေ ဒီပျားရည်ဟာ ဆေးဖက်ဝင်လေ အရည်သွေးကောင်းလေပါ။
UMF 0-4 – MGO တိုင်းတာလို့မရတဲ့ပမာဏပဲပါပါတယ်။
UMF 10-15 – MGO High level နဲ့
UMF >16 – MGO Very high level ပါပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုဖို့ ဆိုရင်တော့ UMF level မြင့်တာကို ရွေးချယ်ဖို့ အကြံပေးပါရစေနော်။
အသန့်စင်ဆုံး Manuka ပျားရည်ကိုတော့ Manuka ပင်လေးတွေရဲ့ ဇာတိဖြစ်တဲ့ New Zealand နိုင်ငံမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံက ရရှိတဲ့ Manuka ပျားရည်ကတော့ UMF level 16 MGO level 260+ ပါရှိပါတယ်။ Austrilia နဲ့ တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကလဲ Manuka ပျားရည်ကို Manuka ပန်းအစား Jelly bush နဲ့ Golden Tea Tree ကနေ အစားထိုးထုတ်လုပ်ကြတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Manuka ပန်းတစ်မျိုးထဲကနေရရှိတဲ့ New zealand နိုင်ငံက Manuka ပျားရည်ကတော့ အရေအသွေး အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကဲ နောက် Manuka ပျားရည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အသားရေအတွက် အကျိုးပြုပုံလေးတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်နော်။
– Manuka ပျားရည်က အနာကျက်မြန်စေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတာကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာ ထိခိုက်ရှနာတွေကို မြန်မြန်ကျက်စေတယ်။
-antibacterial ပဋိဇီဝဂုဏ်သတ္တိရှိတော့ အရေပြားရောဂါ နှင်းခူ ယားနာတွေကိုသက်သာစေတယ်။
-စားသုံးမှီဝဲရင်လဲ အစာအိမ်နာ အစာမကြေတာတွေကို သက်သာစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကိုလည်း ကောင်းစေပါတယ်။
– Manuka ပျားရည်က သာမန်ပျားရည်တွေထက် MGO ပမာဏပိုများတာကြောင့် ဝက်ခြံပြသနာအမျိုးမျိုးကို သက်သာစေတယ်။ အရေပြားရဲ့ခုခံအားစနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေလို့ ဝက်ခြံမဖြစ်အောင်လဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။
– ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်တွေ နေဒဏ်လေဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ တင်းတိတ်မှဲ့ခြောက်တွေကို လျော့ပါးစေတယ်။
-High hydrogen perxoide ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြား Tone ကိုညှိပေးလို့ အသားရောင်မညီတာတွေကို သက်သာစေတယ်။
-Humectant လို့ခေါ်တဲ့ အားကောင်းတဲ့ ရေဓာတ်ဆွဲတဲ့ ပစ္စည်းပါဝင်တာကြောင့် အသားရေ အစိုဓာတ်ကို ကြာရှည်စွာထိန်းပေးနိုင်တယ်။ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသားရေ စိုစိုတင်းတင်းပြောင်ပြောင်လေးရဖို့ ကူညီပေးနိုင်တာပေါ့။
-anti aging properties တွေအများကြီးပါဝင်တာမို့ အရွယ်မတိုင်ခင် အရေးကြောင်းဖြစ်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ရှိပြီးသားအရေးကြောင်းတွေကို ပါးသွားအောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်။
– Royal jelly လို့ခေါ်တဲ့ ပျားဖယောင်းကလဲ သာမန်ပျားရည်ထက်ပိုပါတာကြောင့် အရေပြားကို တင်းရင်းစေပြီး နုပျိုစေပါတယ်။
-ကျွန်မတို့ အရေပြားရဲ့ ပုံမှန် PH ဟာ အက်စစ် (acid) ဖက်ရောက်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးပြူနေတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေ အသားရေထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းအများစုဟာ အယ်လ်ကာလီ (alkali) ဓာတ်ပိုများတော့ အရေပြားရဲ့ PH ဟာ Balance မဖြစ်တော့တာကြောင့် အရေပြားမျက်နှာပြင် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းပြီး အသားခြောက်တာ အရေးကြောင်းနဲ့ ဝက်ခြံပြသနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီ Manuka ပျားရည်ကတော့ PH 4.5 ရှိတာဆိုတော့ အရေပြားရဲ့ PH နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူတာကြောင့် အပေါ်ကပြသနာတွေကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။
-နောက် Manuka honey က နှုတ်ခမ်းကွဲတာ တွေကိုလဲ သက်သာစေပါတယ်။
ကဲအဲ့တော့ Manuka ပျားရည်ကို ဒီတိုင်းလိမ်းကြမလား? လိမ်းလို့ကတော့ ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပျားရည်ဆိုတော့ အမြဲ ကပ်စီးစီးနဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်အဆင်ပြေပါ့မလဲ။ အဲ့ပြသနာအတွက် ဖြေရှင်းပေးဖို့ အရည်သွေးအမြင့်ဆုံး နယူးဇီလန် Manuka ပျားရည်ကိုပဲ အခြေခံထုတ်ထားတဲ့ skincare producys လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေနော်။
အဲဒီ Product လေးတွေကတော့
1. Manuka Honey Gentle Cleanser(All Skin Types)
2.Manuka Honey Purifying Toner
3.Royal Jelly Face Gel (Moisturiser)
4.Manuka Honey Face Cream(Day Cream)
5.Manuka Honey Night Cream
6.Manuka Honey Hand Cream
7.Lip Balm(Bee Propolis)
8.Manuka Honey Soap(Bee Propolis $Cocoa Butter)
47,U Chit Maung Road
Min Lann Bus Stop
Bahan Yangon ,11201
Opening Hours:9:30Am to 6:30Pm
Facebook inbox or cb m.me/ByBeautyNThings
Viber or Phone:09428068497 ကိုဆက်သွယ်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်…
-Manuka Honey ဆိုတာ ၁၉ ရာစုလောကျကနစေပွီး ဥရောပနိုငျငံတှမှော သဘာဝအိမျတှငျးဆေးဝါးအဖွဈ ခတျေစားလာတဲ့ ပြားရညျတဈမြိုးပေါ့။ Manuka ဆိုတာ နယူးဇီလနျ နိုငျငံမှာ သဘာဝအလြောကျ အလကေ့ပြေါကျတဲ့ ခြုံပငျ အပုလေးတဈမြိုးပါ။ ဒီ Manuka ပငျရဲ့ပနျးတဈမြိုးကိုပဲ စားသုံးတဲ့ ပြားလေးတှဆေီကရတဲ့ ပြားရညျကို Manuka honey လို့ချေါတာပါ။ နယူးဇီလနျ Manuka ပငျလေးတှကေို အစှဲပွု ပွီးတော့ပေါ့။
ရိုးရိုးပြားရညျနဲ့ Manuka ပြားရညျ ဘာတှကှောခွားလဲ?
– ရိုးရိုးပြားရညျက ပနျးမြိုးစုံ အပငျမြိုးစုံကို မှီဝဲထားတဲ့ပြားလေးတှဆေီကမှ အဆငျ့ဆငျ့ ပွနျသနျ့စငျပွီးထုတျယူထားတာပါ။ Manuka ပြားရညျကတော့ Manuka ပနျးတဈမြိုးထဲကိုသာ မှီဝဲထားတဲ့ ဥရောပပြားလေးတှဆေီက ထုတျယူထားတဲ့ အတှကျ ပွနျသနျ့စငျဖို့ မလိုတော့အောငျ သနျ့ရှငျးပါတယျ။
အရောငျအားဖွငျ့ကွညျ့မယျဆိုရငျလဲ ပုံမှနျပြားရညျက ရှညေိုရောငျတဈပွေးထဲ ကွညျကွညျလေးရှိပွီး နညျးနညျးကြဲပါတယျ။ Manuka ပြားရညျကတော့ ပုံမှနျထကျ ပိုပဈြတယျ ပိုနောကျတယျ အရောငျနညျးနညျး ပိုရငျ့ပါတယျ။
ပြားရညျမှာ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှကေို သုတျသငျနိုငျတဲ့ Hydrogen peroxide နဲ့ Methylglyoxal (MGO) လို့ချေါတဲ့ ပဋိဇီဝဓာတျသတ်တိတှပေါပါတယျ။ ပုံမှနျပြားရညျတှမှော MGO က ပမာဏအနညျးငယျသာပါပွီးတော့ Manuka honey မှာတော့ ပမာဏ အလှနျမြားပွားစှာ ပါရှိနပေါတယျ။ ပိုထူးခွားတာက MGO မဖွဈခငျ အဆငျ့ဖွဈတဲ့ compound တဈခု ( precursor of MGO) Dihydroxyacetone ကလဲ Manuka ပနျးရဲ့ ဝတျဆံထဲမှာ အမွောကျအမြားပါဝငျနတောပါပဲ။ ဒါက Manuka ပြားရညျကို သာမနျပြားရညျတှနေဲ့ ကှာခွားသှားစတေဲ့ အဓိကအခကျြပါပဲ။ နောကျထပျကှာခွားစတေဲ့ အခကျြတှကေတော့ Manuka ပြားရညျဟာ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျတှေ နောကျ ဓာတျတိုးဆနျကငျြဂုဏျသတ်တိတှေ (Antioxidant property) နဲ့ အရှယျတငျနုပြိုစတေဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှေ (Anti aging property) တှကေ သာမနျပြားရညျထကျ ၄ ဆ ပိုမိုပါဝငျနတောပါပဲ။
အသနျ့စငျဆုံး အကောငျးဆုံး Manuka ပြားရညျကို ဘယျမှာရှာဖှကွေမလဲ?
Manuka ပြားရညျဟာ ခုခတျေမှာ ကနျြးမာရေးအရရော အလှပရေးရာအရပါ အမြိုးမြိုး အသုံးဝငျနတေော့ ထုတျလုပျသူတှကေလဲ ဒီဇိုငျးမြိုးစုံ ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ လှယျလှယျကူကူဝယျယူလို့ ရနပေါပွီ။ အဲတော့ အကောငျးဆုံး Manuka ပြားရညျကို ဘယျလိုရှေးခယျြကွမလဲပေါ့။ Manuka ပြားရညျရဲ့ အရအေသှေးကို တိုငျးတာဖို့ အားလုံးက Unique Manuka Factor Rating (UMF) ဆိုပွီး အတိုငျးတာတဈခု သတျမှတျထားကွပါတယျ။ ဒီကိနျးဂဏနျးအတိုငျးတာက ပြားရညျထဲမှာ MGO & Dihydroxyacetone ဘယျလောကျ Level ပါလဲဆိုတာကို ညှနျးပါတယျ။ UMF rating မွငျ့လေ ဒီပြားရညျဟာ ဆေးဖကျဝငျလေ အရညျသှေးကောငျးလပေါ။
ကိုယျတိုငျအသုံးပွုဖို့ ဆိုရငျတော့ UMF level မွငျ့တာကို ရှေးခယျြဖို့ အကွံပေးပါရစနေျော။
အသနျ့စငျဆုံး Manuka ပြားရညျကိုတော့ Manuka ပငျလေးတှရေဲ့ ဇာတိဖွဈတဲ့ New Zealand နိုငျငံမှာ ရရှိနိုငျပါတယျ။ နယူးဇီလနျနိုငျငံက ရရှိတဲ့ Manuka ပြားရညျကတော့ UMF level 16 MGO level 260+ ပါရှိပါတယျ။ Austrilia နဲ့ တခွားဥရောပနိုငျငံတှကေလဲ Manuka ပြားရညျကို Manuka ပနျးအစား Jelly bush နဲ့ Golden Tea Tree ကနေ အစားထိုးထုတျလုပျကွတာတှလေဲ ရှိပါတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ Manuka ပနျးတဈမြိုးထဲကနရေရှိတဲ့ New zealand နိုငျငံက Manuka ပြားရညျကတော့ အရအေသှေး အကောငျးဆုံးပါပဲ။
ကဲ နောကျ Manuka ပြားရညျရဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အသားရအေတှကျ အကြိုးပွုပုံလေးတှကေို ပွောပွပေးပါမယျနျော။
– Manuka ပြားရညျက အနာကကျြမွနျစတေဲ့ ဂုဏျသတ်တိရှိတာကွောငျ့ မီးလောငျဒဏျရာ ထိခိုကျရှနာတှကေို မွနျမွနျကကျြစတေယျ။
-antibacterial ပဋိဇီဝဂုဏျသတ်တိရှိတော့ အရပွေားရောဂါ နှငျးခူ ယားနာတှကေိုသကျသာစတေယျ။
-စားသုံးမှီဝဲရငျလဲ အစာအိမျနာ အစာမကွတောတှကေို သကျသာစပွေီး ခန်ဓာကိုယျခုခံအားကိုလညျး ကောငျးစပေါတယျ။
– Manuka ပြားရညျက သာမနျပြားရညျတှထေကျ MGO ပမာဏပိုမြားတာကွောငျ့ ဝကျခွံပွသနာအမြိုးမြိုးကို သကျသာစတေယျ။ အရပွေားရဲ့ခုခံအားစနဈကို ပိုမိုကောငျးမှနျစလေို့ ဝကျခွံမဖွဈအောငျလဲ ကာကှယျပေးနိုငျတယျ။
– ဝကျခွံကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အမာရှတျတှေ နဒေဏျလဒေဏျကွောငျ့ဖွဈတဲ့ တငျးတိတျမှဲ့ခွောကျတှကေို လြော့ပါးစတေယျ။
-High hydrogen perxoide ပါဝငျတာကွောငျ့ အရပွေား Tone ကိုညှိပေးလို့ အသားရောငျမညီတာတှကေို သကျသာစတေယျ။
-Humectant လို့ချေါတဲ့ အားကောငျးတဲ့ ရဓောတျဆှဲတဲ့ ပစ်စညျးပါဝငျတာကွောငျ့ အသားရေ အစိုဓာတျကို ကွာရှညျစှာထိနျးပေးနိုငျတယျ။ကွညျလငျတောကျပတဲ့ အသားရေ စိုစိုတငျးတငျးပွောငျပွောငျလေးရဖို့ ကူညီပေးနိုငျတာပေါ့။
-anti aging properties တှအေမြားကွီးပါဝငျတာမို့ အရှယျမတိုငျခငျ အရေးကွောငျးဖွဈတာတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျသလို ရှိပွီးသားအရေးကွောငျးတှကေို ပါးသှားအောငျကူညီပေးနိုငျတယျ။
– Royal jelly လို့ချေါတဲ့ ပြားဖယောငျးကလဲ သာမနျပြားရညျထကျပိုပါတာကွောငျ့ အရပွေားကို တငျးရငျးစပွေီး နုပြိုစပေါတယျ။
-ကြှနျမတို့ အရပွေားရဲ့ ပုံမှနျ PH ဟာ အကျစဈ (acid) ဖကျရောကျပါတယျ။ နစေ့ဉျအသုံးပွူနတေဲ့ မကျြနှာသဈဆပျပွာတှေ အသားရထေိနျးသိမျးတဲ့ ပစ်စညျးအမြားစုဟာ အယျလျကာလီ (alkali) ဓာတျပိုမြားတော့ အရပွေားရဲ့ PH ဟာ Balance မဖွဈတော့တာကွောငျ့ အရပွေားမကျြနှာပွငျ ခိုငျခံ့မှုအားနညျးပွီး အသားခွောကျတာ အရေးကွောငျးနဲ့ ဝကျခွံပွသနာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ဒီ Manuka ပြားရညျကတော့ PH 4.5 ရှိတာဆိုတော့ အရပွေားရဲ့ PH နဲ့ အနီးစပျဆုံးတူတာကွောငျ့ အပျေါကပွသနာတှကေို ကာကှယျပွီးသားဖွဈတာပေါ့။
-နောကျ Manuka honey က နှုတျခမျးကှဲတာ တှကေိုလဲ သကျသာစပေါတယျ။
ကဲအဲ့တော့ Manuka ပြားရညျကို ဒီတိုငျးလိမျးကွမလား? လိမျးလို့ကတော့ ရတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ပြားရညျဆိုတော့ အမွဲ ကပျစီးစီးနဲ့ ဆိုတော့ဘယျအဆငျပွပေါ့မလဲ။ အဲ့ပွသနာအတှကျ ဖွရှေငျးပေးဖို့ အရညျသှေးအမွငျ့ဆုံး နယူးဇီလနျ Manuka ပြားရညျကိုပဲ အခွခေံထုတျထားတဲ့ skincare producys လေးတှနေဲ့မိတျဆကျပေးပါရစနေျော။
အဲဒီ Product လေးတှကေတော့
8.Manuka Honey Soap(Bee Propolis $Cocoa Butter) တို့ဖြစ်ပါတယ်…
Viber or Phone:09428068497 ကိုဆကျသှယျပွီးဝယျယူနိုငျပါတယျနျော..
Dr. ပြည့်ရှင်းManuka Honey